पारिवारिक पुनर्जीवित, मण्डली पुनर्जीवित, राष्ट्रलाई जगाउन, हे प्रभु # 322
येशूले: चर्चका न्यायाधीश ईजेबेलले आत्मा चिम्लिन्छ त्यो, भाग 3
एक homily "; एक सामान्यतया छोटो प्रवचन; एक धार्मिक वा नैतिक विषयमा छोटो कुराकानी। वा बाइबलीय विषय एक व्याख्यान वा भाषणले" छ
एफिसी पुस्तकबाट homilies हाम्रो श्रृंखला मा, हामी मसीही परिवार reviving केन्द्रित। अब, म प्रकाश पुस्तकका छोटो सन्देशहरू पद-द्वारा-पद श्रृंखला साझेदारी छु, विशेष चर्च reviving मा लक्षित। हाम्रो देश जागा छ भने, पहिले परिवार र चर्च पुनर्जीवित हुनुपर्छ।
TEXT: प्रकाश 2: 18-21:
18 अनि थिआटायराको लेख्ने मा चर्च को दूत निम्ति; यी कुराहरू आगो को एक ज्वाला निम्ति जस्तै आफ्नो आँखा पार्नु भएकोछ गर्ने, र आफ्नो खुट्टा ठीक पीतल जस्तै हो परमेश्वरको पुत्र, भन्नुभयो;
19 म तपाईंको काम र दान र सेवा, र विश्वास र तपाईंको धैर्य र तपाईंको काम थाहा; र पहिलो भन्दा बढी हुन अन्तिम।
20 तिमी सिकाउन र मेरो सेवकहरू व्यभिचार प्रतिबद्ध गर्न बहकाउने गर्न, र कुराहरू मूर्तिहरू निम्ति बलिदान खान स्त्री जिजेबेल आफु भविष्यवक्ता भनेर calleth जो sufferest किनभने, म, तिमीलाई विरुद्ध केही कुराहरू छन् Notwithstanding।
21 अनि म उनको व्यभिचारको पश्चात्ताप गर्न उनको स्थान दिनुभयो; र त्यो छैन पश्चात्ताप।
A.T. ? म यो कसलाई गरिरहेको छु धेरै हामी कल भनेर ख्रीष्टको सेवा जस्तै सबै छैन ... हामी ख्रीष्टको लागि यो गरिरहेको हुनुहुन्छ भने, हामी मानव इनाम वा पहिचानको लागि ख्याल छैन: Pierson सेवा सर्वोच्च परीक्षण यो छ ", भन्नुभयो । "
लियोनार्ड Ravenhill, "यो चर्च को सबैभन्दा महिमित घण्टा अझै जन्म गर्न छ कि हुन मेरो Solemn दृढ विश्वास हो। विश्वास को सबै नायक अझै सूचीबद्ध छैन गरिएको चर्चका सबै अध्याय, ', चन्द्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा स्पष्ट बताए। ब्यानरहरू, 'एउटा सेना रूपमा सूर्य र भयानक अझै लिखित गरेका छैनन् गरिएको। विश्वास सबैभन्दा ठूलो शोषण अझै गरिन छ। "
आफ्नो पुस्तक मा, दस सबैभन्दा Revivals आजसम्म, एल्मर शहरहरू र हाम्रो साथ डगलस पोर्टर साझेदारी: ""
येशूले थिआटायराको मा मण्डलीको लागि प्रशंसा केही उच्च शब्दहरू छ। उहाँले "म तपाईंको काम र दान र सेवा, र विश्वास र तपाईंको धैर्य थाहा छ।", भन्छन् अब एल सम्म माथि, अक्षर यस श्रृंखला मा येशूले कुनै चर्च यसको काम को आधार मा केवल सराहना गरेको छ। यो टिप्पणी सानो चर्च एक चर्च प्रभु लागि एक प्रभाव बनाउन ठूलो हुन छैन भनेर हामीलाई बताउन, सानो शहर मध्ये जान्छ कि महत्वपूर्ण छ। यो सेवा को बस मात्रा येशूको लागि तर सेवा गुणस्तर देख छ छैन, र थिआटायराका चर्च Spades दुवै छ जस्तो देखिन्छ।
येशूले आपसमा, आफ्नो काम र उहाँलाई आफ्नो सेवाको लागि तिनीहरूलाई प्रशंसा र संसारमा। सूप भान्सा, Daycare, अस्पताल visitation, afterschool हेरविचार, खाना भान्साको सामान राख्ने ठाउ, र थप - यो कल्पना हरेक सेवाको थियो कि चर्च को तरिका जस्तै सुनिन्छ। तिनीहरूले प्रभु लागि व्यस्त थिए। तर, अधिक महत्वपूर्ण कुरा, आफ्नो राम्रो कामको सबै माथि दान, विश्वास, र धैर्य को ख्रीष्टको आत्मा मा र्याप थियो। तिनीहरूले प्रभु र सँगी मानिस प्रेम थियो। तिनीहरूले परमेश्वरको सकारात्मक परिणाम आफ्नो प्रयासमा बाहिर ल्याउन भनेर विश्वास थियो। र तिनीहरूले प्रभु मा पर्खेको रूपमा धैर्य थियो र तिनीहरूले निराशा गल्तीलाई र मान्छे को आफ्नो समुदायमा foibles संग व्यवहार गर्नुभयो रूपमा। आज चर्च आफ्नो उदाहरणबाट सिक्न सक्छौं। हामी हाम्रो काम गरेर, तर प्रेम, विश्वास, र धैर्य को एक आत्मा हाम्रो काम गरेर बस छैन ख्रीष्टको आदर गर्छन्।
अन्तमा, हामी प्रशंसाको एक अन्य बिन्दु प्रभु थिआटायराको मा मण्डलीको लागि छ याद। मात्र थिए तिनीहरूले असल काम गरिरहेको, तर आफ्नो काम उपाय मा वृद्धि भएको थियो। येशूले चर्च गरेको उत्तरार्द्ध काम आफ्नो पूर्व काम भन्दा ठूलो हो कसरी देखेको छ भन्छन्। यो चर्च बढ्दै थियो छैन मलिन राम्ररी गरिरहेको वा हामी आज यो कल रूपमा "दान थकान" प्राप्त। तिनीहरूले प्रभु आफ्नो सेवामा आगो थिए, र hotter र hotter समय संग रही। धेरै चर्च, र मसीहीहरूले व्यक्तिगत फिर्ता प्रभु लागि प्रशस्त गुणस्तर सेवाको जीवन प्राप्त गर्न आवश्यक छ। हामीले यसको सट्टा सकेसम्म सानो गर्न प्रयास को सेवा गर्न तरिकाहरू देख गर्न पर्छ। परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा उहाँलाई लागि र उहाँको विश्व लागि जल्दै गरेको सेट हुन सक्छ।
हाम्रो मनोवृत्ति THEODORE Chambers यो कविता मा व्यक्त जस्तो हुनुपर्छ:
म परमप्रभु मेरो परमेश्वर तपाईंको सेवक हूँ
र म मर्न दिन सम्म हुनेछ -
कुनै म ग्रस्त कि दुखाइ मामिला,
कुनै म रुन कि आँसु मामिला
तपाईं मेरो पछाडि छ भनेर थाह पाउँदा मा,
जबकि तपाईंको हात मेरो हृदय समाउँदै
म तपाईं भन्न सबै गर्न प्रतिज्ञा।
म तपाईंको दुई ठूलो आदेशहरू टाउको हुनेछ।
अब, मलाई थाहा म कुनै येशूले छु कि;
म मोशा, दाऊद, वा पावलले छैन।
तर म प्रतिज्ञा म मेरो सबैभन्दा गर्न छौँ
तपाईं मेरो सबै र सबै दिन।
म तपाईं बारेमा सारा संसार बताउन छौँ,
आफ्नो छोरा र पवित्र पनि आत्मा।
म सबैलाई देखाउने छौँ तपाईं कसरी उत्कृष्ट छन्
तपाईं मेरो सेवाको प्रशस्त द्वारा।
गरेको प्रार्थना गरौं।
अब, यदि तपाईं मुक्तिदाताको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टको थाहा छैन, कृपया ध्यानमा राख्न भनेर बाइबल भन्छ, "प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास र तिमी सुरक्षित हुन।" पहिलो, तपाईं पापी हो भनेर बुझ्न, र पापको ज्याला मृत्यु र नरक छ भनेर। तर परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको आफ्नो पापको लागि क्रूसमा मर्न पठाउनुभयो। उहाँले गाडे, र उहाँले तपाईं मृत्यु र नरकको देखि सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर परमेश्वरको शक्ति द्वारा ब्यूँती। रोमी 10:13 "जसले प्रभु सुरक्षित गरिनेछ को नाम पुकारा पर्नेछ।", भन्छन्
के तपाईं येशू ख्रीष्टको आफ्नो पापको लागि क्रूसमा मर्नुभयो भनेर विश्वास भने, गाडे, र ब्यूँती, र तपाईं आफ्नो मुक्तिको आज, यो सरल प्रार्थना मलाई प्रार्थना कृपया लागि उहाँलाई भरोसा गर्न चाहनुहुन्छ: पवित्र पिता परमेश्वर, म भन्ने महसुस म पापी हुँ म मेरो जीवनमा केही खराब काम गरेको र। येशू ख्रीष्ट खातिर, मेरो पाप को मलाई माफ गर्नु। म अब येशू ख्रीष्ट, मेरो लागि मर्नुभयो गाडे, र फेरि उठ्नुभयो मेरो हृदय सबै संग विश्वास गर्छन्। प्रभु येशू, मेरो मनमा आयो र मेरो प्राण बचाउन मेरो जीवन आज परिवर्तन गर्नुहोस्। आमिन।
तपाईं बस येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा भरोसा, र तपाईं कि प्रार्थना र आफ्नो हृदय देखि चाहनुभएको हो भने, म तपाईं परमेश्वरको वचन आधारित भनेर घोषणा, अब तपाईं नरक देखि मुक्ति छन् र तपाईं स्वर्ग आफ्नो बाटो मा छन्। परमेश्वरको परिवार स्वागत छ! आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको भरोसा भएकोमा बधाई। तपाईं जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छन्। थप जानकारी ख्रीष्टमा आफ्नो आफूले पाएको नयाँ विश्वास बढ्न मदत गर्न को लागि, सुसमाचारको प्रकाश Society.com जाने र पढ्न "तपाईं ढोका माध्यम प्रविष्ट गर्नुहोस् पछि के"। ,9"म मेरो ढोका हुँ, कुनै पनि मानिस मा प्रवेश भने, उहाँले सुरक्षित गरिनेछ, र र बाहिर जानेछौ, र खर्क पाउनेछ।": येशू ख्रीष्ट यूहन्ना 10 मा भने
परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी तिमीलाई माया गर्छौ। अनि परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष सक्छ।